JMS - Malagasy
Ao amin'ny Jindal Medi Surge, dia mampiasa ny sakany, ny habeny ary ny traikefanay izahay mba hamerenana sary an-tsaina ny fomba fanaterana ny fitsaboana sy hanampiana ny olona hiaina ela kokoa sy ho salama kokoa. Ao anatin'ny tontolo miova tanteraka, manao fifandraisana amin'ny siansa sy ny teknolojia izahay mba hanambatra ny fahaizanay manokana amin'ny fandidiana, vahaolana orthopedics miaraka amin'ireo hevitra lehibe an'ny hafa hamolavola sy hanaterana vokatra sy vahaolana momba ny dokotera sy ny marary.
Momba ny Jindal Medi Surge (JMS)
Mpanamboatra mpitarika (Marina & OEM) ny implants orthopedique, fitaovana, fixator ivelany ho an'ny fandidiana orthopedic olombelona sy veterinera izahay. Manome iray amin'ireo portfolio orthopedic feno indrindra eran'izao tontolo izao izahay. Ny vahaolana JMS, amin'ny sehatra manokana ao anatin'izany ny fanarenana iombonana, ny trauma, ny craniomaxillofacial, ny fandidiana ny hazondamosina ary ny fitsaboana ara-panatanjahantena, dia natao hampandrosoana ny fikarakarana marary sady manome lanja ara-pahasalamana sy ara-toekarena amin'ny rafi-pitsaboana manerantany. Rehefa mankalaza ny fanavaozana isika, ny fanoloran-tenantsika dia ny "hitazona izao tontolo izao ao anatin'ny mavokely ara-pahasalamana".
Amin'ny maha-mpisava lalana amin'ny fitaovana ara-pitsaboana, dia mifantoka hatrany amin'ny fampisondrotana ny fenitry ny fikarakarana izahay—miasa amin'ny fanitarana ny fidirana amin'ny marary, manatsara ny vokatra, mampihena ny vidin'ny rafi-pahasalamana ary mitondra ny lanjany. Mamorona fikarakarana ara-pahasalamana marani-tsaina sy mifantoka amin'ny olona izahay mba hanampiana ireo marary tompoinay ho sitrana haingana kokoa ary hiaina ela kokoa sy mavitrika kokoa. Ny orinasanay dia manolotra karazana fandidiana maromaro:
Orthopedics - ireo orinasa ireo dia mifantoka amin'ny fanampiana ireo marary amin'ny fitohizan'ny fikarakarana - manomboka amin'ny fidirana aloha ka hatramin'ny fanoloana fandidiana, miaraka amin'ny tanjona hanampy ny olona hiverina amin'ny fiainana mavitrika sy mahafa-po.
Fandidiana - Ao amin'ny hopitaly manerana izao tontolo izao, ny mpandidy dia miasa amim-pahatokiana amin'ny fampiasana rafitra fandidiana azo itokisana sy fitaovana natao hanomezana fitsaboana azo antoka sy mahomby indrindra amin'ny toe-pahasalamana isan-karazany.
Jindal Medi Surge dia manana tantara manankarena - ahitana fanavaozana, fiaraha-miasa amin'ireo mpitarika indostrialy, ary mitondra fiovana eo amin'ny fiainan'ny marary maro eran'izao tontolo izao.
Entanina isika mba ho olom-pirenena vanona eto amin'izao tontolo izao. Tompon'andraikitra amin'ny vondrom-piarahamonina misy antsika sy iasantsika ary amin'ny fiaraha-monina maneran-tany isika. Tokony ho olom-pirenena vanona isika. Tsy maintsy mamporisika ny fanatsarana ny olom-pirenena isika, ary ny fahasalamana sy ny fanabeazana tsara kokoa. Tsy maintsy mikojakoja ny fananana ananantsika isika, miaro ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary. Manao fanamby anay ny Credo anay mba hametraka ny filana sy ny hahasoa ny olona tompoinay ho loha laharana.
Amin'ny maha mpanamboatra fitaovana fitsaboana azy, Jindal Medi Surge dia mahatsiaro ny fitaomana ataontsika sy ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana. Nampihena ny fampiasany kaomba mivadi-po ny tranonay. Nanao dingana ihany koa izahay tamin'ny fanatsarana ny fonosana. Ny tranonay dia nampihatra ny fampiasana Electronic ho an'ny vokatra isan-karazany mba hampihenana ny fampiasana taratasy. Neken'ny Governemanta Indiana ny fitarihana antsika noho ny fandraisany anjara amin'ny fanatsarana mitohy ny tontolo iainana sy ny fanehoana ny fanarahana maharitra ny lalàna momba ny tontolo iainana. Ny tranokalanay rehetra dia miasa amin'ny fenitra avo indrindra miaraka amin'ny fitaovana maro.
Ny fandraisantsika anjara
Jindal Medi Surge dia manana toerana manokana hanatsarana ny fiainan'ireo sahirana amin'ny alalan'ny fanomezana vokatra, fanomezana asa soa ary fandraisana anjara amin'ny fiarahamonina. Hamaky bebe kokoa
Ny asa an-tsitrapontsika
Eo amin'ny sehatra eo an-toerana, ny mpiasa ao amin'ny tranontsika manerana izao tontolo izao dia manolo-tena ho mpanoro hevitra ny ankizy mpianatra, manome rà, manangona harona sakafo ho an'ny fianakaviana sahirana ary manatsara ny manodidina azy.
FANONTANIANA EMAIL: info@jmshealth.com
EMAIL FANONTANIANA ANY an-trano: jms.indiainfo@gmail.com
TALATA: +91 11 43541982
INDRINDRA: 5A/5 Ansari Road Darya Ganj New Delhi – 110002, INDIA.
UNIT-1: Toerana indostrialy Anand Mohan Nagar Ghaziabad, Uttar Pradesh INDIA.